ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်များ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့်စာအုပ်များ - အိုင်ကွန်
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> စာအုပ်များ
ဒီမှာငါတို့စာအုပ်တွေပြောကြတယ်။ ငါသူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်, သူတို့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်, မှတ်စုများ, ငါမီးမောင်းထိုးပြသည့်ခေါင်းစဉ်များကယ်တင်။ ငါစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုလေ့လာရန်ရှာဖွေလိုသည့်အရာများအကြောင်းကျွန်ုပ်လုပ်သောမှတ်စုများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျန်ဝက်ဘ်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာအသစ်များနှင့်စိတ် ၀ င်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုငါမီးမောင်းထိုးပြ။ ၎င်းတို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ စာစီစာကုံးများ၊
စီမံကိန်း ၂ ဆင့်
ဤအပိုင်းသစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်များ၊ စာပေများ၊ ၎င်းကို Isle of Gont ဟုခေါ်သည်။ စီမံကိန်းဟောင်းမှာစာပေဘာသာရပ်တွေကိုပဲကန့်သတ်ခဲ့တယ်။
ယခုချဉ်းကပ်နည်းသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသွားမည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအချက်များအားလုံးကိုမီးမောင်းထိုးပြတော့မည်။ ငါလုပ်နိုင်လျှင်ငါသူတို့နှင့်ဆက်ဆံနေသောခေါင်းစဉ်အားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ဒါဟာစာပေဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Louise Glück ၏ Wild Iris
ဒီစာအုပ်, မျက်ဝန်းရိုင်း Louise Gluck မှစာအုပ်တွေ ချန်ထားလို့ ထင်ရှားတဲ့ စင်ပေါ်မှာ ရှိနေလို့ စာကြည့်တိုက်ကနေ ယူခဲ့တာ။ စာရေးသူ မသိဘဲနဲ့ သူမဟာ နိုဘယ်ဆုရှင်မှန်း မသိဘဲနဲ့ ယူခဲ့တာ။ နှစ်အုပ်ဖတ်ပြီးရင် အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် အဲဒါကို တကယ်ခံစားဖို့ နည်းနည်းတော့ ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ထုတ်ဝေသူနှင့် စာရေးဆရာ (Louise Glück)၊
Poetry Viewer Collection ထုတ်ဝေသူ၏ ကဗျာကြည့်ရှုသူစုစည်းမှုမှ အမြဲတမ်းလေးစားတန်ဖိုးထားရသော ဘာသာစကားနှစ်မျိုးထုတ်ဝေသော စာအုပ်ကြည့်သူဒါပေမယ့် အဲဒါမှာ မှတ်စုတွေ ပါနေတာကို သတိရတယ်။ Andrés Catalán ဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံး ဇာတ်လမ်း. Hubert Reeves၊ Joël de Rosnay၊ Yves Coppens နှင့် Dominique Simonnet တို့၏ မူရင်းလျှို့ဝှက်ချက်များ။ Óscar Luis Molina မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာ သူတို့ပြောသလိုပဲ၊ ဒါက ငါတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံးဇာတ်လမ်းပါပဲ။
“စာစီစာကုံး” ပုံစံကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ၎င်းကို နယ်ပယ်တစ်ခုစီမှ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့် သတင်းထောက် Dominique Simonnet မှ အင်တာဗျူး ၃ ခု ပါဝင်ပြီး သုံးပိုင်းခွဲထားသည်။
ပထမအပိုင်းသည် စကြဝဠာအစမှ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် သက်ရှိများပေါ်လာသည်အထိ နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင် Hubert Reeves နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအပိုင်းတွင်၊ ဇီဝဗေဒပညာရှင် Joël de Rosnay သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများပေါ်ထွန်းချိန်မှစ၍ လူသားများ၏ပထမဆုံးဘိုးဘေးများပေါ်ထွန်းလာချိန်အထိ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်။
ဒီဘုရင်တွေက ငါ့ကိုမေးတယ်။ အစက်စာအုပ်၊ ကျည်ဆန်ဂျာနယ်. အဲဒါကို အစက်ချပြထားတာကြောင့် အပိုင်းအစတွေ၊ တီထွင်မှုတွေ စတာတွေကို ကောင်းကောင်းဖမ်းဆုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
အမှန်က အချက်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော ချိန်ခွင်လျှာနှင့် သိမ်မွေ့သော အကိုးအကားနှင့် ၎င်း၏ သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာကို ပေးဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အကိုးအကားမရှိခြင်းကြောင့် အလွတ်မှတ်စုစာအုပ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အရှုပ်အရှင်းများကို ရှောင်ရှားကြပြီး စတုရန်းမှတ်စုစာအုပ်များ၏ ဝန်ပိုခြင်းကို ရှောင်ရှားကြပြီး ဥပမာ၊ စာကြောင်းမှတ်စုစာအုပ်များတွင် မတွေ့ရသော ဒေါင်လိုက်အကိုးအကားများကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးသည်။
Jesús Maeso de la Torre မှ Comanche
ငါက အနောက်တိုင်းကို သိပ်ချစ်တဲ့သူလို့ ငါကြိုပြောထားတာပဲ။ Comanche သည် 2019 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးသမိုင်းဝင်ဝတ္ထုအတွက် Spartacus Award ကိုရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းကို အထူးအကြံပြုထားသည်။
ဒါဟာ စိတ်ကူးယဉ် ဖြစ်ရပ်မှန်တွေပါတဲ့ ဝတ္ထုဖြစ်ပြီး၊ ဒါက အသံနေအသံထားနဲ့ ဝေးပါတယ်။ အရူးမြင်းနှင့် Custer ၎င်းသည် ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းဖြင့် ပြောပြသော စာစီစာကုံးဖြစ်သည်။
ဤတွင် ဇာတ်လမ်းကို ဖြစ်ရပ်မှန်များဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ မစ်ရှင်များ၊ တိုက်ပွဲများစသည်ဖြင့် စသည်တို့သည် မှန်ကန်ပါသည်။ အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဘဝတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ် ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
စပိန်အင်ပါယာက မက္ကဆီကိုကို ချုပ်ကိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာတော့မယ့် ၁၈ ရာစုရဲ့ နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်တွေမှာ စပိန်နယူးစပိန်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
ငါတို့အကြောင်းကို ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး။ အနောက်ရုပ်ရှင်တွေမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ လူအုပ်ကြီး မရောက်လာခင် စပိန်ကိုလိုနီပြုချိန်ကို ပြောပြပါတယ်။ စပိန်လူမျိုးများသည် ထိုနေရာတွင်ရှိနေခဲ့ပြီး လမ်းဖွင့်ပေးကာ အမေရိကား၏ အမေရိကဖြစ်လာမည့်အရာကိုလည်း နယ်ချဲ့နေခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
ကပ်ရောဂါကာလတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အလောင်းအစား။
ကပ်ရောဂါရဲ့နောက်ခံကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာအုပ်တွေ အက်ဆေးတွေ ထပ်မဖတ်တော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ စိတ်ပျက်ခြင်း၏နောက် Zizek ကပ်ရောဂါငါကအဲဒါကိုယူ Innerarity Pandemocracy ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ စာစီစာကုံးများကို ဖြည့်စွက်ပြီးဖြစ်သည်။
အဲဒီနောက် စာကြည့်တိုက်ကို ကျွန်တော်ရောက်လာပြီး Ethics cosmopolita စာအုပ်ကို တွေ့ပြီး ကျွန်တော်တွေ့သမျှအားလုံးကို Adela Cortina က ဖတ်ပြလိုက်တယ်။ အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဘလော့ဂ်မှာ သုံးသပ်ချက်လေး ချန်ထားခဲ့တယ်။ ကျင့်ဝတ်ကဘာလဲ။ ပြီးတော့ ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး Aporophobia စာအုပ်ကို ကျွန်တော် ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။
Monte Cristo ၏အရေအတွက်
Alexander Dumas (ဖခင်) မှ Monte Cristo ရေတွက် အကြိမ်အများဆုံးဖတ်ဖူးတဲ့ဝတ္ထုပါ။ ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း 30 အတွင်း ပဉ္စမအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ မတူညီတဲ့ အရသာတစ်မျိုးနဲ့ ထွက်သွားတိုင်း၊ ငါဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြီး ငါ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ တွေးခေါ်ပုံတွေ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ပါ။
၎င်းသည် 1968 ထုတ်ဝေသော၊ မိသားစုအမွေခံဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဓာတ်ပုံတွေပါတဲ့ ဒီအတွဲကို အမြဲဖတ်ပြီး သမိုင်းကြောင်းတွေအပြင် ဖတ်ဖူးသမျှအချိန်တိုင်းကို အမှတ်ရစေမယ့် ဒီစာစောင်ကို ဖတ်ရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ အဲဒါ Rodegar ထုတ်ဝေမှုများ Javier Costa Clavell မှ ဘာသာပြန်ပြီး Barrera Soligro မှ ကာဗာ
ဝတ္ထုသည် 1815 ရာစုတွင်သတ်မှတ်ထားပြီး XNUMX တွင်စတင်သည်။ ၎င်းကိုသင်မသိပါက၎င်းသည်လက်စားချေသည့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ THE REVENGE မှတစ်ခုဖြစ်သော ကမ္ဘာ့စာပေဂန္ထဝင်ကြီးများ.
ငါမိသားစုစာကြည့်တိုက်ကိုစာရင်းပြုစုဖို့၊ စီမံခန့်ခွဲတဲ့နည်းလမ်းကိုငါရှာဖွေနေတယ်။ အခုငါစာကြည့်တိုက်အကြောင်းပြောနေတယ်၊ ​​ငါ ebooks တွေကိုရောနှောနေသလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် Caliber နဲ့ဆက်လုပ်မယ်ထင်တယ်။ မရ။
ကျွန်တော့်မှာစာအုပ်အနည်းငယ်ရှိတယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ နည်းပညာစာအုပ်တွေနဲ့အခြားအထောက်အပံ့တွေအပြင်ဘယ်နှစ်အုပ်လည်းမသိဘူး။ ဒါတွေအားလုံးကငါ့မိန်းမနဲ့ငါ့သမီးတွေနဲ့အတူလာပြီးငါတို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိသားစုစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကရှုပ်ထွေးတယ်။ ငါတို့မှာမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေမရှိဘူး၊ ဘယ်စင်ပေါ်ကအခန်းလည်းဆိုတာငါတို့မသိဘူး၊ ကိစ္စအတော်များများမှာအဲဒါကတော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ကံမကောင်းစွာနဲ့ငါတို့အားလုံးမှာမြင်ကွင်းမရှိနိုင်ဘူး၊ တော်တော်များများကအ ၀ တ်တွေအထဲမှာဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတန်းမှာရှိတယ်။ စင်ပေါ်။
JuliánSimónLópez-Villalta de la ၏ထုတ်ဖော်စာအုပ် အယ်ဒီတာ Tundra။ ကျွန်တော့်အမြင်များကိုအချက်များများစွာပြောင်းလဲစေသည့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်သည်။
စာအုပ်ထဲတွင်သူအပေါင်းတို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ် မြေထဲပင်လယ်သစ်တော၏ဂေဟဗေဒ။ သစ်ပင်များ၊ ချုံဖုတ်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားစားသတ္တဝါများ၊ granivores များ၊ အပင်မျိုးပွားသူ၊ ၀ တ်မှုန်များ၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊
ကပ်ပါးကောင်များ၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့်သင်္ကေတများနှင့်ညစာစားပွဲများနှင့်အိမ်ငှားများအကြားရှင်သန်မှုကိုရည်စူးပြီးအခန်းကဏ္ section (မိုးခေါင်မှု၊ မီးဘေး၊ နှင်းခဲစသည်တို့) နှင့်အခြားအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်သူတို့နေထိုင်ရာနေရင်းဒေသများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလုံးလုံးလျားလျားကြည့်ရှုသည်။ အားလုံးသည်အပြည့်အဝရှင်းပြပြီးပေါင်းစပ်ထားသဖြင့်ဂေဟစနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်အလွန်ထူးခြားသည်၊
အကြောင်းပါ နှစ်ပေါင်းများစွာ Neil Gaiman ကရေးသားနှင့်ဤအသံအတိုးအကျယ်အဘို့အ Chris Ridell အားဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသောကျမ်း။ ငါစာအုပ်ကိုစာကြည့်တိုက်ထဲမှာတွေ့တယ်၊ ကောက်ကိုင်ရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်။ ငါ Neil Gaiman အတွက်သိပြီးသား Coralineအားဖြင့် သင်္ချိုင်းစာအုပ် ငါစာရင်းထဲတွင်ရှိသည်သောအခြားအရာများစွာကိုငါသေးမဖတ်ရသေးသော (အမေရိကန်ကိုးကွယ်ရာ, Sandman, Stardustသူတို့၏ Nordic ဒဏ္myာရီ, စသည်တို့) ။ Chris Ridell ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ ဘာသာပြန်ကို Montserrat Meneses Vilar မှထုတ်ယူသည်။
ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့တခြားအမျိုးအစားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဖတ်ချင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ဘဝနဲ့စာပေတွေမှာသူတို့စာစီစာကုံး၊ ကွန်ဖရင့်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များရှိရင်။
Página1 Página2 ... Página5 အောက်ပါ →